MIU ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများ - ကွန်ပြူတာပညာရှင်အစီအစဉ်ကိုတွေ့ဆုံပါ
မှစ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံရန် ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်း
မှောက်သည် အပြာရောင် ထောက်ခံချက်ထုတ်ဖေါ်သို့မဟုတ်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့အစက် လိမ္မော်သီး ဗီဒီယိုများကြည့်ဖို့အစက်။
"ငါသည် mum မှာသင်ယူသောအရေးအပါဆုံးအရာ Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်စိတ်ကိုရှင်းလင်းဖို့ကယ့်ကိုကူညီပေးသည်။ ဒါ့အပြင်သူကလေ့ကျင့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ "
"ဒီသင်တန်းကအရမ်းလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ကျောင်းသားများအလုပ်သင်များအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ပြင်ဆင်မှုပေးသော, စျေးကွက်များတွင်အသုံးပြုနည်းပညာများနှင့်မူဘောင်ကျင့်သုံးသည့်အချိန်အများစုကိုဖြုန်းနေကြတယ်။ အဆိုပါပိတ်ပင်တားဆီးမှုစနစ်ကတွင်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုလိုက်လျောညီထွေနဲ့တူကွဲပြားခြားနားသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောကွောငျ့အရေးကြီးပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်လလျှင်တစ်ဦးသင်တန်းလုပ်နေတာတစ်ကြိမ်မှာအတော်ကြာသင်တန်းများကိုင်တွယ်များ၏ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ "
St.Louis, Missouri မှာရှိတဲ့အလုပ်သင်
"ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မဟာကျွန်မတို့အသိပညာနှင့်အလုပ်အကိုင်များကိုချဲ့ထွင်ရန်အမေရိကန်ဘရာဇီးကနေရောက်လာတယ်။ mum စုံလင်သောရွေးချယ်မှုပဲ! ဝန်ထမ်းများသည်အလွန်ကြင်နာဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်နေ့ကတဦးတည်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုခချမ်းသာများနှင့်အောင်မြင်မှုဂရုစိုက်ခဲ့သည်။ သင်တန်းများနှင့်ဒြေအလွန်ကောင်းနေတယ်။ ကျနော်တို့အလွန်အမင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြီးထွားမှုအတွက် mum အကြံပြုပါသည်။ "
အန်း Ximenes Guimaraes
“ MIU ကအောင်မြင်တဲ့ IT အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေနဲ့အရင်းအမြစ်အားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ဘဏ္aidာရေးအထောက်အပံ့ကဘရာဇီးလ်ဆော့ဖ်ဝဲရေးဆွဲသူအများစုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေတယ်၊
“ ကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံများစွာကအဖိုးတန်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ခဲ့ပြီးသူတို့အတွေ့အကြုံကနေအများကြီးသင်ယူခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့နည်းပညာနဲ့ပျော့ပျောင်းတဲ့စွမ်းရည်တွေတိုးတက်အောင်ကျွန်တော့်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ထူးချွန်တဲ့ပါမောက္ခတွေနဲ့အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာအကြံပေးတွေရှိတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်ရွေးချယ်ထားတဲ့နယ်ပယ်မှာ Computer Vision မှာအပြည့်အ ၀ ပေးရတဲ့အလုပ်သင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရစေတယ်။ ”
"ဒီမှာအဆိုပါပါမောက္ခကယ့်ကိုကျောင်းသားများကဂရုစိုက်။ လူအားလုံးတို့သည်ဒြေအမေရိကန်အလုပ်အကိုင်အဈေးကွက်ထဲမှာဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာများအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိသည်။ "
ဂျူလီယာ Chen က
"mum ကျွန်မရဲ့ MOM အဖြစ် '' mum '' ကိုခေါ်ချင်ပါတယ်။ ငါ 8600 ငါ၏အအိန္ဒိယမိသားစုထံမှဝေးကီလိုမီတာဖြစ်ကြောင်းကိုတူသောဒီနေရာမှာငါမခံစားရဘူး။ ရိုးရှင်းတဲ့စကား mum မှာသငျသညျလုံ့လရှိသူကလူကိုရှာဖွေ, ငြိမ်းချမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကျန်းမာအစားအစာ, အနိမ့်ကနဦးငွေပေးချေမှု, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ငါထင်ဘယ်တော့မှမပေးသောတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဆရာ-ထူးခြားတဲ့တက္ကသိုလ်ရှိခဲ့သညျ။ "
ငါသည်ဤရေးလိုက်သကဲ့သို့ငါအောင်မြင်စွာငါ့အလိုရှိသမျှ On-ကျောင်းဝင်းသင်တန်းအလုပ်ကိုပြီးစီးပြီမကြာမီငါ၏အအလုပ်သင်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ငါ mum မှာဒီအချိန်တိုလေးအတွင်းလေ့လာသင်ယူကြပါပြီဘယ်လောက်ရှင်းပြရန်မစကားလုံးများကိုရှိသည်။
အဆိုပါပါမောက္ခကြီးမြတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်တန်းကောင်းကောင်းအလုပ်ဈေးကွက်အဘို့အသငျသညျပွငျဆငျဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့မိသားစုသုံးလအကြာငါ့ကိုမှီဝဲခြင်းနှင့်ဖဲရ်ဖီးလ်အတွက်ပျော်ရွှင်စွာနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နေကြရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကာလအစဉ်အမြဲအရင်ကထက်ပိုမိုတောက်ပကြည့်! ကျနော်တို့ mum join ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ငါသည်အမြင့်မား mum အကြံပြုပါသည်။ "
Bellaire တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက် Rand Group မှ
"စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်တက်လက်တွေ့ကျတဲ့လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အရာခပ်သိမ်း၏ထိပ်တွင်, TM အလိုအလျောက် technique ကိုသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်း paid2နှစ်အများဆုံးကို up-to-date ဖြစ်အောင်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း, လက်တွေ့ကျတဲ့သင်တန်းများထိပ်တန်းဒြေနှင့်အကြီးအကအမေရိကန်ပညာရေးထောက်ပံ့ပေးသည်။ "
Syed Anas Ahmed က
ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "TM, ကောင်းတစ်ဦးအလေ့အထဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံကိုလေ့လာသည်အခြားသင်တန်းများလေ့လာနေကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာ2သို့မဟုတ်3ရက်ပေါင်းထက်ပိုပြီးအဘို့အ bug တွေနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်, သငျသညျအာရုံဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုပြန်ထိုင်ပြီးခဏဆငျခွငျဖို့အခြိနျယူလျှင်, သင့်ရဲ့စိတ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်, သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, သင်အာရုံစိုက်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ဒီတော့ငါ TM အလိုအလျောက် technique ကိုကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်နှင့်အတူဝင်ကပြောပါတယ်။ "
"mum ကျနော်တို့မတူကွဲပြားမှုဆင်နွှဲတဲ့ Multi-ယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်က "အဲသယောပိနှစ်သစ်ကူး 2011" ကြီး mum ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံဖို့လိုအပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအပ်ပေးတော်မူ၏။ ကျနော်တို့ Injera နဲ့အဲသယောပိန့်ညက်ကိုပြင်ဆင်ကြောင့်ဤမျှလောက်ပျော်စရာကြီးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးစုများနှင့်အတူအဲသယောပိကခုန်ပြ-ကျောင်းသားများကိုသညျ လာ. အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအားထုတ်။ ဒါကြောင့်သင်က mum ထံမှရသောတဦးတည်းအရာမတူကွဲပြားမှုများ၏အခမ်းအနားဖြစ်၏။ "
"ဒါဟာဝေးအိမ်ကနေဒီလာမယ့်အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အရင်းအမြစ်များကိုကန့်သတ်ထားကြသူကျွန်တော်တို့ကိုများကဲ့သို့ပြည်သူ့ပေမယ့်ကြီးမားတဲ့အိပ်မက်ကျနော်တို့ရနိုင်သလောက်အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်သင်၏ IT အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးအတွက်မည်သည့်တက္ကသိုလ်အရှိဆုံးအကူအညီနဲ့ပေးထားပါတယ်။
mum ငါ့ကိုပိုကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှတံခါးကိုမသာပေးထားပေမယ့်လည်းကျွန်မရဲ့မိဘတွေဖို့ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြဲ, ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာဤပြီးမြောက်ဖို့ကျွန်မကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ ဒါကကြင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ၏အအိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာသေး၏။ ဥစ္စာလည်းလို့ရတယ်။ "
Istiaque Ahmed က Khan က
ငါလျှောက်ထားသည့်အခါအချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးယခုထင်သည့်အခါ "ငါတကယ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုအသစ်တစ်ခုခုကိုလိုချင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒီမှာဖြစ်စေချင်ကြောင်းတော်တော်လေးသေချာခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါမဆိုနောင်တမဆိုနိုင်ပါ။ လျှောက်ထား၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်ယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများအဘို့ငါပြန်လုပ်ဖို့ခဲ့လျှင်ယခုငါအခွင့်အလမ်းတံခါးဖွင့်လှစ်မယ့်သူကလျှောမဟုတ်ကန်မယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။
, အခွင့်အလမ်းကိုယူပိုကောင်းဘို့အသင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်သောအခွင့်အလမ်းများအတွက်ရောက်ရှိဖို့။ အဆိုပါလူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်သင်တို့တွင်အထင်နိုင်ပါတယ်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်ပါတယ်, ဒီမှာဘဝမှညှိဘို့ကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်အခြားအတက္ကသိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုံးဝတတ်နိုင်ဖြစ်၏။ "
"မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများ, ငါမေလတွင် 2005 အုပ်စုတွင်တစ်ဦး ComPro ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် Transcendental တှေးတောဆငျခွမှတဆင့်သင့်လျော်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့တစ်လမ်း၏နက်ရှိုင်းတဲ့နားလည်မှုပေးခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတကယ်ကဒီအစီအစဉ်ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါဟာအလွန်အကျိုးရှိသောပါပဲ။ ဒါ့အပြင်အပေါငျးတို့သပါမောက္ခအရမ်းကျယ်ပြန့်ဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည်ကိုသိနှင့်ဖော်ရွေများနှင့်အထောက်အကူဖြစ်စေပါ။ "
"ငါနောက်ကျောအီရန်၌ငါ့အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ခဲ့သောအရာကိုနောက်ကွယ်မှထွက်ခွာစိုးရိမ်ခဲ့ပေမယ့်က MS ပရိုဂရမ်တစ်ခုကတန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလာမယ့်အဆင့်အထိကိုငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ငါကမြင့်မားတဲ့ paid အလုပ်သင်ရှိသည်။ "
"mum ငါ့ပညာအတတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး, ငါ့ယူအက်စ်အေအိုင်တီဈေးကွက်ထဲမှာလက်တွေ့ကျအတှေ့အကွုံအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ရရှိရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ငါ့ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးတက်မှုနှုန်းပေးထားတဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုလုံးအသစ်သောအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ငါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအခြားကျောင်းသားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်အားဖြင့်ငါ၏အယဉ်ကျေးမှုစွမ်းရည်တိုးတက်စေခြင်းဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်းရရှိခဲ့ပါပြီ။ အကြှနျုပျ၏ကမ္ဘာကြီးကိုရှုမြင်အတန်းယူပြီးနှင့်ငါ့ဒုတိယဘာသာစကားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်, အသစ်တစ်ခုနိုင်ငံတွင်နေထိုင်နေတဆင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီ။
8 နှစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်လုပ်အတွေ့အကြုံကိုဖွင့်ရရှိမှုစဉ်ကအမှန်တကယ်ကျောင်းဝင်းအပေါ်လေ့လာရုံ2လအတွင်းရှိခြင်းတစ်ခုခြွင်းချက်အခွင့်အလမ်းပါပဲ။ ငါမည်သူမဆိုဤထူးခြားသောအစီအစဉ်ကိုအထူးအကြံပြုလိုတယ်။ "
ဘွဲ့လွန်, TekValley Corporation မှာဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာ
"ငါသည် mum မှာရိုက်ထည့်သောကွန်ပျူတာပညာရှင်များမာစတာရဲ့အစီအစဉ်ကိုသင့်အားအမေရိကန်လုပ်သားအင်အားအတွက်တန်ဖိုးရှိသော, နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံကိုထည့်သွင်းလိမ့်မည်သည့်တစ်ဦးအလုပ်သင်ရရှိရန်နှင့်အတန်းကသာ 8-9 လအကြာ On-ကျောင်းဝင်းထဲမှာရနေတဲ့အနိမ့်ကနဦးအခကြေးငွေပေးဆောင်ခွင့်ပြု သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်။ ဒါဟာ mum ငါ၏အအိပ်မက်အောင်မြင်ရန်ငါ့ကိုကူညီပေးနေကြောင်းကြီးမြတ်ပါတယ်။ "
အလုပ်သင်ကျောင်းသား, ချီကာဂို, အီလီနွိုက်
"ငါတကယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှလာမယ့်ကတည်းကတန်ဖိုးထားသော mum မှာရိုးရှင်းပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ technique ကို, လေ့လာသင်ယူကြသည်။ ကြှနျတေျာ့ကိုမှန်ကန်ဘဝကိုစတင်ခဲ့ပြီး, ငါ့တာဝန်များကိုစုဆောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်ငြိမ်ဝပ်စွာအချို့ကိုအချိန်လေးရှိသည်ဖို့လိုတယျ။ "
"လူအပေါင်းတို့သည်ထိုမြို့သူမြို့သားပရမ်းပတာ, ငါ့အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီဘဝအတွင်းမှာပဲ, ငါ့ 20 မိနစ်ဆင်ခြင်ငြိမ်းချမ်းရေး, အသက်, ငြိမ်ဝပ်စွာ၏ကြောက်မက်ဘွယ်အချိန်လေးရှိကြ၏။ ငါနှစ်ကြိမ်နေ့စဉ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို, ငါ့စိတ်ကိုနုပျိုနှင့်မိနစ်နှစ်ဆယ်အကြှနျုပျ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အကျင့်ကိုကျင့်အားကစားနှင့်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်ငါ့ကိုအများကြီးစွမ်းအင်ပေးသောနိုင်ဘူး။ ဒါဟာငါ့ကိုဒါဖန်တီးမှုကိုဖန်ဆင်းနှင့်ငါ၏ကျယ်ပြန့်စဉ်းစားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါ Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကိုအစဉ်အမြဲငါဘဝမှာသင်ယူကအကောင်းဆုံးအရာကြီးထင်, အခုငါက၎င်း၏ဆိုးကျိုးများအများကြီးပိုကြည့်ပါ။ "
"စိတ်ဖိစီးမှုဆော့ဖျဝဲပရိုဂရမ်-သတ်မှတ်ရက်အတွက်အဓိကကစားသမားဖြစ်ပြီးအချိန်ပေါ်ပြီးဆုံးရန်လူများ, မတည်မငြိမ်ဒေါသထွက်နေတဲ့နှင့်အပူတပြင်းပါစေ။ TM အလိုအလျောက်၏အကူအညီနှင့်အတူ, ငါပိုပြီးအာရုံစိုက်နှင့်အချိန်အများစုကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်, နှင့်မြင့်မားသောသဘင်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ငါ၏အကုမ္ပဏီအတွက်ပြည်သူ့လျှို့ဝှက်ချက်အကြောင်းငါ့ကိုမေးခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်ငါ TM အလိုအလျောက်အကြောင်းကိုဆောင်းပါးများသူတို့ကိုထောက်ပြသည်။ "
"ဖဲရ်ဖီးလ်ကအကြီးအအလှအပနှင့်အတူတိတ်ဆိတ်တဲ့, ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီး, ဒီမှာကလူနွေးထွေးကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကအသိုင်းအဝိုင်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှလူတို့နှင့်အတူမိတ်ဆွေများကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ, ဒီမှာကမေတ္တာရှင်နေပါတယ်။ ငါစွန့်ခွာလာသောအခါငါသည်ဤတွေအများကြီးလက်လွတ်လိမ့်မည်။ "
"ကျွန်မစိတ်ထဲ-အနေနဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်က MS ဒီဂရီ, နှင့်ပြည်နယ်များအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းလယ်ပြင်၌အခြို့သောအတှေ့အကွုံအတွက်တဦးတည်းရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ mum ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်မကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်၏ရှစ်လအကြာငါ့အပေါ်-ကျောင်းဝင်းလေ့လာမှုများပြီးဆုံးနှင့် Kansas ပြည်နယ်အတွက်အကြီးတန်းဆော့ဝဲရေးသားသူ CSC မှာ Professional က Analyst, အဖြစ်ငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ ငါဆဲ WIC ဘဏ်လုပ်ငန်းအသင်းနှင့်အတူရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
ငါတောင်ပိုသင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း (CPT) အနေအထားအားဖြင့်, ငါ၏အတန်းမှတဆင့်ဤမျှလောက်သင်ယူနှင့်အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်။ mum အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်ဖြစ်နိုင်သည်အသုံးချသင်္ချာအတွက်ထူထောင်အခက်ကဲ့သို့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံငါ့ကို-ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လေးစားမှုကိုသွန်သင်ကြပြီနိုင်ကြောင်းအဘယျသို့အကြှနျုပျကိုသင်ပေးတယ်။
ငါ mum ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်ဤအံ့သြဖွယ်မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိသည်ဟုရန်အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငါသည်လည်းထိုအအံ့သြစရာကလူများ၏အကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့နဲ့ငါ့ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်တော်မူပြီးမှဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ "
"ကျွန်မပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပါ GRE စမ်းသပ်ယူပြီးပြီးနောက် mum အကြောင်းကိုကြား၏။ ငါသည်ငါ့သတင်းအချက်အလက်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များကနေသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဒေတာဘေ့စဝင်ခံရဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်စာမေးပွဲဖြေဆိုတာမဖြစ်မီငါမေးသော်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုငါ့တိုင်းပြည်-သောအရာယခုအချိန်တွင်ကျွန်မရဲ့ပန်းတိုင်၏2ခဲ့ကြသည်ပြင်ပတစ်ဘွဲ့ရဒီဂရီနှင့်အလုပ်ရရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့, တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအမေရိကန်ကိုကျော်ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိရန်စတင်, သူတို့ထဲကတစ်ခုကြွင်းသောအရာမှထွက်မတ်တပ်ရပ် ဘဝမှာ။
ပထမတော့ကျနော် (ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီက US မှာအများဆုံးတတ်နိုင်ဘွဲ့ရအစီအစဉ်များကိုတဦးက) ကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းထင်နှင့်တစ်ဦးရှိပါတယ်ဖြစ်အံ့သောငှါ "ဖမ်း" ဒါပေမယ့် website ကိုလာရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်ငါကဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက် စုံလင်သောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုတသက်တာမှာတခါလာသောသူတို့၏တဦးတည်း, သင်ထွက်ပေါက်မသွားပါစေနိုင်ပါသည်။
ငါသည်ငါ့ပန်းတိုင်2ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တွေးတောဆင်ခြင်တတ်ရန်သင်ယူခြင်း၏အတွေး, ကျန်းမာသောအစားအစာရှိခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာမွို့တှငျနထေိုငျခဲ့သညျမသာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ငါ၏အစွန့်စားမှုရန်စုံလင်သောက start နဲ့တူတံပိုးမှုတ်သောအခါ။ "
"သင်အောင်မြင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့အိပ်မက်ရှိပါက mum အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ "
"ကျွန်မရဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်, ငါ mum မှာရှိသည်ဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတူညီတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုခံစားရန်မြန်မာအားလုံးကို software ကို developer များချင်ပါတယ်။ "
mum မှာ "အဆိုပါ ComPro အစီအစဉ်အပေါ်-ကျောင်းဝင်းလေ့လာမှု 8 လအတွင်းအားလုံးပညာရေး, အိုးအိမ်, အော်ဂဲနစ်ထမင်းစားခန်းနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးသောအနိမ့်ကနဦးဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။ ကြွင်းသောအရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတကာအိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းထိတွေ့မှုပေးသည်ဖြစ်သောအလုပ်သင် / သင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း, စဉ်အတွင်းချေးငွေအဖြစ်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင် Transcendental တှေးတောဆငျခွများ၏အလေ့အကျင့်ငါတို့အများဆုံးအလားအလာအနားယူနှင့်စူးစမ်းကူညီပေးသည်။ ဤအရာအလုံးစုံအားသာချက်များနှင့်အတူ mum ငါ၏အအိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ "
"mum မှာလေ့လာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြှနျတေျာ့စိတျအပိုငျးမနောင်တရှိပါတယ်။ mum သင်သင်တန်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝ (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ) ဒါပေမယ့်လည်းဘဝကိုယ်တိုင်နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကသင့်ရဲ့ဖြစ်လျက်ရှိ၏အခ်ါသဘာဝမသာသွန်သင်တဲ့ထူးခြားတဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျောင်းဝင်းပေါ်နှင့်ဖဲရ်ဖီးလ်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအံ့သြလောက်အောင်ဖော်ရွေသည်။ သင်တစ်ဦးအပြောင်းအလဲရှာနေနှင့်သင့်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုထပ်တိုးချင်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် mum မှာစာရင်းသွင်းသည်သင်၏ခြေလှမ်းကျောက်ခဲနှင့်ပစ်သည်။
mum ရဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်ကိုသငျသညျအရှင် US မှာဒီမှာအစစ်အမှန်စျေးကွက်နှင့်ထိတွေ့ခံရဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောကြောင့်သင်စိန်ခေါ်မှုနှင့်အသိပညာနှင့်အသက်တာ၏အခြေအနေတွင်သင်ကိုယ်တိုင်တိုးတက်အောင်များအတွက်မျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။ "
nice Rodelane ရွက် Villanueva
"စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ '' ပညာရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဂရုစိုကျသောတက္ကသိုလ်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ၏သခင်ဒီဂရီတစ်လျှောက်လုံးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတနှင့်စပ်လျဉ်းငါ့ပညာအတတ်မြှင့်တင်ရန်။
ငါ Maharishi ကမ္ဘာကိုမိတ်ဆက်သော TM အလိုအလျောက်အလေ့အကျင့်တန်ဖိုးထားတယ်။ ဒါဟာအလေးပေးခံရခြင်းမရှိဘဲတစ်ရက်-to-နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများစုစည်းဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးသည်။
ငါသည်အမြင့်မားသူတို့ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလိုက်ရန်အဘို့အထောကျအကူပွုပါလိမ့်မယ်အရာအလားအလာကျောင်းသားများ, များအတွက်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသခင်ဘွဲ့အကြံပြုပါသည်။ "
ဘွဲ့လွန်, Des Moines, Iowa-
"ငါ Maharishi တက္ကသိုလ်မှစာရင်းသွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအရမ်းဝမ်းသာတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် Software များဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တစ်ဦးချင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအာရုံစိုက်, ကောင်းစွာစနစ်တကျဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသင်တန်းများအဖြစ်မကြာမီသင်တို့အပေါ်မှာ-ကျောင်းဝင်းသင်တန်းများ၏ 8-9 လအတွင်းအပြီးသတ်အဖြစ်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ဝင်တပြင်ဆင်ထားရန်စည်းရုံးခဲ့ကြသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာအသိပညာအပြင်, ထို program ကိုလည်းအလုပ်သင်အလုပ်ရှာခြင်းနှင့်အင်တာဗျူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, ပေးထားပါတယ်။ သင်မြင်ရပါလိမ့်မည် ကျောင်းသားများ၏အောင်မြင်မှုကို program ကိုစတည်ဆောက် သူ့ဟာသူ။
ထို program ၏အကျိုးကျေးဇူးများကြီးမားဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကျောင်းသားများကိုစုဆောင်းလေ့ကျင့်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများထံမှကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတွေ့အကြုံကျောင်းသားများကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရ။
ငါသည်ငါ့အလုပ်သင်ရှာဖွေရေးစတင်များနှစ်ပတ်အတွင်းငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ ငါနှစ်နှစ်အတွင်းအကြှနျုပျ၏ချေးငွေဆပ်ဖို့လည်းစီမံခန့်ခွဲကြပါပြီ, အခုငါအကြီးတန်းဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏တဦးတည်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသုံးနှစ်ဆက်တိုက်နံပါတ်တစ်အိုင်တီအလုပ်ရှင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီ။ သငျသညျငါသညျဤအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူကိုအသာပုတ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမည်မျှအသိပညာစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ငါသည်ဤအစီအစဉ်ကို join ဖို့ငါ့အခငျြးကိုနိုင်ငံသားတိုက်တွန်းပါသည်။ "
"ငါ့ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များတစ်ခုမှာကမ္ဘာကြီးကို software ကိုဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူအလွန်အားကောင်းတဲ့ဆော့ဝဲရေးသားသူဖြစ်ဖို့ပဲ။ သာ 8-9 လအတွင်းဒီမှာလေ့လာခွငျးအားဖွငျ့, ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်ကမ္ဘာလုံးပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုယှဉ်ပြိုင်ဖို့အပြိုင်အဆိုင်အနားအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်၎င်း၏ကလူကအရမ်းဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူတစ်ဦးကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်သင်ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရမှာပေါ့အထူးသဖြင့်လျှင်, လေ့လာဖြစ်မယ့်ဘေးကင်းလုံခြုံရာအရပျဖြစ်၏။ "
"ငါသည်ဤအစီအစဉ် join ဖို့စတင်ရန်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ဤသည်ကိုသင် USA တွင်လေ့လာဖို့အဘို့ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေဖို့လိုခငျြတဲ့အံ့သြဖွယ်အသက်, အလုပ်အကိုင်အ, မိတ်ဆွေများနှင့်အမေရိကန်အတှေ့အကွုံရှိသည်။
ကျွန်မထိုင်းနိုင်ငံ၌ငါ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်မကိုယ့်ကိုကိုယ်ဤမျှဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးချဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ Maharishi "ဒီထက်လုပ်ပါနှင့်ပိုပြီးပြီးမြောက်။ " ကျနော်တို့ရန်သင်ယူကပြောသည်ဒါကငါ့ထံသို့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်ကိုလေ့လာခဲ့, ယခုငါအံ့သြစရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသည်။
ဘွဲ့လွန်, ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာ, Pennsylvania ပြည်နယ်
"ငါသည်အုပ်ချုပ်ရေး၌ငါ့မာစတာပြီးစီးခဲ့နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှပိန်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဘွဲ့လွန်ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါသည်ငါ၏လုပ်ဘော်ဆောင်ဘက်တူရကီနိုင်ငံသားများ mum မှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံလေ့လာ လာ. , mum သူတို့ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်အရာအားလုံးပျော်မွေ့ရန်ဤရက်ရက်ရောရောအခွင့်အလမ်းကိုယူကြောင်းအကြံပြုပါသည်။ ဒါကတစ်ချိန်က-in-a-တစ်သက်တာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါသူတို့ကဒီမှာကွန်ပျူတာသိပ္ပံလာများနှင့်လေ့လာစေရွေးချယ်မှုနောင်တသူမည်သူမဆိုတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးဘူး။ "
MBA ဘွဲ့ရဘွဲ့လွန်, ဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါ
ငါ့ကိုသငျနှငျ့အတူငါ၏အ mum အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှကြစို့။
အတော်ကြာအမေရိကန်တက္ကသိုလ်များကနေလက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပွီးပွီးနောကျ, ငါ mum ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ MSCS အစီအစဉ်ကို chosed ရှိသည်ဟုရတဲ့အကြောင်းရင်းနေသောခေါင်းစဉ်:
ဒါဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားတစ်ဦးကျောင်းသားချေးငွေအဖြစ်နီးပါး 90% ပညာသင်ဆုပေးထားပါတယ်။
8-9 လအတွင်း On-ကျောင်းဝင်းပညာရေးရှိခြင်းပြီးနောက်သင် US မှာမဆိုအိုင်တီကုမ္ပဏီအတွက်သင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်းပေးဆောင်ကြဘူးတစ်ခုအခွင့်အလမ်းရှိသည်။
နှင့်အရေးအပါဆုံးအရာက, သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကို stressless ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ငါငါ့ကို professionaly နှင့် personaly ကြီးထွားစေရန်ကူညီပေးသည်ထားတဲ့ကမ္ဘာ reknowned ကုမ္ပဏီတစ်ခုအလုပ်သင်ရှိသည်။ ခြောငါ mum မှာရရှိခဲ့, ငါကဒီမှာဖူးအခွင့်အလမ်းများကိုငါ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပြီအသိပညာ။ သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးဦးဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစားလိုပါက mum မှကြိုဆိုပါတယ်။ "
ဘွဲ့လွန်, Philadelphia တွင်, Pennsylvania ပြည်နယ်
"mum မှာသူတို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးထွားအဖြစ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပညာရှင်တွေအာရုံစိုက်ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏စိတ်ကိုသနျ့နှင့်သင့်အာရုံငြိမ်သက်နေတဲ့အကြီးအ tool တစ်ခုဖြစ်သည်သော Transcendental Meditation® technique ကို, သင်ယူ, ဒါကြောင့်သင်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။ TM အလိုအလျောက်ဘာသာတရားနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။ ဒါဟာ programming နဲ့တခြားဘာပဲငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုမပေါ်မှာငါ့ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်စေသည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှသင့်ရဲ့မာစတာဘွဲ့များအတွက်လေ့လာဖို့ဒီထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုယူပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ "
"ဒါဟာအမေရိကန်မာစတာဘွဲ့ထက်ပိုပါတယ်။ ဒါဟာအမေရိကန်မာစတာဘွဲ့ဖြစ်ပါသည်ပေါင်းအထိနှစ်နှစ်အတှေ့အကွုံအမေရိကန်ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်။ သင့်အနာဂတ်တောက်ပစေပါလိမ့်မယ်။ mum အဆိုပါအိုင်တီဈေးကွက်ကယခုထက် သာ. ကောင်း၏ဘယ်တော့မှခဲ့ US မှာအများအပြားအိုင်တီကုမ္ပဏီများကအသိအမှတ်ပြုကြောင့်တစ်ဦးအလုပ်သင်ရယူခြင်း, အစဉ်အဆက်ထက် ပို. လွယ်ကူသည်။ "
သငျသညျသေးမဆိုဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင် "သို့ဖြစ်လျှင်ဤအရှိဆုံးဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်များတွင်နေထိုင်နေနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့ရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကလက်တွေ့ကျတဲ့ TM အလိုအလျောက် technique ကိုအတူတိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းစွာကျောင်းဝင်းအပေါ်လေ့လာနေ 8-9 လအတွင်းနှင့်အတူစတင်ပါ။ ဤသည်ကိုသိကျွမ်းရနှင့်သင်တစ်ဦးစိန်ခေါ်မှုအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ "
Software Development, မိုက်ကရိုဆော့ဖမှာအင်ဂျင်နီယာချုပ်
"ဘာကိုငါ Compro အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးခံစားခဲ့ရသည့်ပါမောက္ခများကယ့်ကိုအသီးအသီးကျောင်းသား၏အောင်မြင်မှုကိုဂရုစိုက်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုတစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်း၌ဆုံးမဩဝါဒသောအိုင်တီစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သက်ဆိုင်သောအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ပါ။ "
"mum မှာလေ့လာဘဝမှာကြီးမားတဲ့နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါကဒီမှာလေ့လာငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပြီ။
သင်တစ်ဦး CS မာစတာဘွဲ့ရဖို့လေ့လာနေပါတယ်နေချိန်မှာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရယူခြင်းဘဝမှာနှစ်ခုကိုအဓိကရည်မှန်းချက်များပြည့်စုံ။ ဒါဟာငါ့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပေါ်အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်, ငါကပိုပြီးကြီးမြတ်အခွင့်အလမ်းများဆောင်ကြဉ်းပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ "
"ဖဲရ်ဖီးလ်တွင်နေထိုင်သောမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်, ငါန်းကျင်ကလူငါ့ကိုနှင့်အခြားသူများကိုလေးစားကြသည်ဟုခံစားရ," Sahar ကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကကျွန်မရဲ့ပဝါဝတ်ဆင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, သူတို့ထဲကတစ်ဦးအဖြစ်ငါ့ကိုဆက်ဆံပါ။ ငါညှဉ်းဆဲခံစားခဲ့ရဖူးဘူး။ "
"ဒါဟာအလွန်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းသောနေရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ပြင်ပမှာရပ်ရွာအဖြစ်ကောင်းစွာကိုလည်းဖော်ရွေအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်အော်ဂဲနစ်အစားအစာပြင်ဆင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းငါဖဲရ်ဖီးလ်တွင်နေထိုင်အကြောင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ "
သည်အလုပ်ဖို့ 100 အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများ "ငါသည် Fortune မဂ္ဂဇင်းမဂ္ဂဇင်းထဲမှာစာရင်းဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာသကဲ့သို့ငါ၏အလုပ်သင်လုပ်နေတာခံရဖို့အများဆုံးကံဖြစ်၏" ။ "ဒါဟာဘယ်အရာကိုငါစာသင်ခန်းထဲမှာသင်ယူငါ့ကိုအောင်မြင်နှင့်ငါ၏ပျော်မွေ့ကူညီပေးနေကြောင်းကြည့်ဖို့ဖြည့်ဆည်းနေသည် အလုပ်! အစဉ်မပြတ်ငါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအကြှနျုပျနှငျ့အများစွာကိုအခြားသူများကိုဤပညာရေးရာပူဇော်သက္ကာကိုများအတွက် mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဒြေနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မည်။ "
အယ်လ် Hadi အောက်အက်ဘ Tolba
"mum ဖြစ်မယ့်ကြီးမြတ်နေရာဖြစ်၏။ ပညာရေးကြီးလှ၏။ လူများ, လေးစားမှုအထောက်အကူဖြစ်စေအမြဲတမ်းပြုံးနေဖြစ်ကြသည်။ တဖန်သင်တို့ CPT နှင့်အဝေးသင်ပညာရေး (DE) မှတဆင့်ပင်ပြီးနောက် On-ကျောင်းဝင်းလေ့လာမှုသိကျွမ်းခြင်း၌ကြီးထွားလာစောင့်ရှောက်လော့။ DE အသိပညာ၏ဘဏ်ဍာရင်ဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ "ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး, Operating Systems က, အဆင့်မြင့် Software Development, အဖြစ်ကအထူးသဖြင့်ဘာသာရပ်များကိုချစ်
အိုမာ Menjikuo Mefire
"mum ငါသည်ငါ့သခင်အဘို့အရန်လျှောက်ထားတစ်ခုတည်းသောတက္ကသိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအွန်လိုင်းကအကြောင်းကိုဖတ်ပါနှင့်ချက်ချင်းအစီအစဉ်ကိုပုံဖွဲ့စည်းခဲ့သောလမ်းနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းခဲ့သည်။ ငါစကားကိုနားထောငျနှင့် mum ၏ယခင်နှင့်လက်ရှိကျောင်းသားများကထောက်ခံစာပြောင်းလဲနေတဲ့အသက်တာ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဖတ်, ဤမိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မစောင့်နိုင်ဘူး။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုနိုင်အောင်ဝေး Transcendental Meditation® technique ကို၏အလေ့အကျင့်များပါဝင်သည်အရာသည်၎င်း၏သိစိတ်ကို- အခြေခံ. ပညာရေး, အားဖွငျ့အကြှနျုပျအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ငါပိုကောင်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ရန် လာ. , ဦးနှောက်၏အချို့အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများ၏အတွင်းစိတ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်မည်သို့ငါ၏အကြံအစည်များနှင့်အတွေ့အကြုံများ, ငါ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုသြဇာလွှမ်းမိုးပါပြီ။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ၏အဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ငါ့ပစ်မှတ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်နေဖို့နိုင်စွမ်းတိုးတက်လာကြပါပြီ။ mum အတွက်သင်ကြားရေးသင်တန်းများအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့ချဉ်းကပ်မှုတို့သည်ကြီးစွာသောအတိုင်းအတာအထိငါ့အနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာတိုးတက်ခဲ့သည်။
mum လူတိုင်းဂရုစိုကျရှိရာတဦးတည်းကြီးမားသောမိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများ, ဒြေနှင့်ဝန်ထမ်းများလူတိုင်းအတွက် fit နိုင်သောနေရာဟာအလွန်ကျန်းမာပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပါ။ မည်သူမဆိုလိုအပ်နေသောအခါကူညီရန်တစ်စုံတစ်ဦးကိုအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။
ငါသည်ငါ့အသိပညာဖော်ပြခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းတစ်ဦး Internship အခွင့်အလမ်းများအတွက်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
သငျသညျဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသို့မဟုတ် data ကိုသိပ္ပံနယ်ပယ်များတွင်အလွန်ကြီးစွာသောကွန်ပျူတာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လိုလျှင် "သည် mum ကွန်ပျူတာပညာရှင်များမာစတာရဲ့ program ကိုသင့်ရဲ့အိပ်မက်ဟာလက်တွေ့လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်အဖွဲ့ကလျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှခြေလှမ်းမှာသငျသညျကိုထောကျပံ့မညျဖွစျသညျ။ သငျသညျကြိုဆိုပွဲ mum န်ထမ်းများအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုခစျြလိမျ့မညျ။ mum ငြိမ်းချမ်းစွာကျောင်းဝင်းရှိပါတယ်။ အားလုံးသင့်အတန်းမြင့်မားကျွမ်းကျင်, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခများကဆုံးမသွန်သင်ကြသည်။ အံ့ဖှယျအလုပ်ရှာဖွေရေးရေးစင်တာဝန်ထမ်းပညာရှင်များအမေရိကန်အလုပ်သင်ဈေးကွက်ထဲဝငျဖို့သငျသညျပွငျဆငျခွငျးပါလိမ့်မယ်။
ယောက်ျားတွေစောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့ - နိုင်ငံတကာအဆင့်ပေါ်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအသိပညာတိုးတက်စေရန်သင်၏အချိန်ယခု "!
ဒါကြောင့်ပြည်ပမှာသွားကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်သကဲ့သို့ "ငါသည်ဤခြေလှမ်းအကြောင်းကိုအများအပြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိခဲ့ခြင်း, mum ငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ကွောငျးဟာအလွန်အသုံးဝင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝင်ခွင့်များဝန်ထမ်းများရှိပါတယ်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကိုလည်းယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရရန်အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။
mum ငါနိုင်ငံအတွင်းအကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီတဦးတည်းအတွက်ပေးဆောင်အလုပ်သင်ရဖို့ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ, သင်ယူရှိရာတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောသင်တန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် mum တစ်ဦးသိစိတ်ကို- အခြေခံ. ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေး, ဒါကြောင့်ငါ Transcendental တှေးတောဆငျခွ-အနေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဖယ်ရှားလိုက်ပါနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်သဘောမျိုးထုတ်လုပ်ရန်ကူညီပေးကြောက်မက်ဘွယ် technique ကိုသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ "
"mum မှာအစီအစဉ်ကိုငါချို့တဲ့ခဲ့ကွောငျးအခြို့သောအရေးကြီးသောကဏ္ဍများကိုနားလည်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရှေ့ဆက်ရန်သင့်အားပြင်ဆင်, နှင့်အမေရိကန်အလုပ်အကိုင်အဈေးကွက်ထဲမှာအောင်မြင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကျောင်းဝင်းလုံခြုံဖြစ်ပြီး, ဖဲရ်ဖီးလ်ရှိလူများဒါဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ ငါသည်လည်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကျောင်းသားတွေနဲ့အတူလေ့လာနေပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ဒီနေရာမှာလာမယ့်အစဉ်အမြဲငါဖန်ဆင်းထားသောအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ `si vous aurez cette အခွင့်အလမ်း, ne la ratez surtout pas !!` "
"ဒီ mum ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစနစ်ကငါ့ကိုအချိန်-ထိုကဲ့သို့သောအယ်လဂိုရီသမ်အဖြစ်မှာတဦးတည်းဘာသာရပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မအမေဇုံကနေကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုရနိုင်အောင်ဤ "အမေရိကန်အတွင်းငါးထိပ်တန်းကုမ္ပဏီကြီးများ၏တဦးတည်း, တစ်ဦးမြင့်မားသောအဆင့်မှာအလုပ်သင်ရှာဖွေရေးအတွက်ငါ့ကိုကိုပြင်ဆင်
"ဘာ mum အထူးစေသည်ကြောင့်လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်, ကျောင်းသားများစကားကိုနားထောင်တတ်သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဒြေနှင့်ဝန်ထမ်းများ, ကြှနျုပျတို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပတ်ဝန်းကျင်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါအကျော်ကြားဆုံးကုမ္ပဏီများမှ-Ford ကားမော်တော်ကုမ္ပဏီများထဲမှနဲ့ငါ့ paid အလုပ်သင်လုပ်နေတာ၏ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ကံဖြစ်၏။ "